महिलाको शरीरभित्र पस्याे ४ फिट लामो सर्प, पेटबाट यसरी निकालियो (भिडियो) – सडक मिडिया
महिलाको शरीरभित्र पस्याे ४ फिट लामो सर्प, पेटबाट यसरी निकालियो (भिडियो)
सडक मिडिया September 27, 2020 0
काठमाडौं: संसारमा अनौठा घ’टनाहरु घ’टिरहेका हुन्छन जुन हामीलाई पत्याउन गार्हो हुन्छ । जुन घ’टना सुन्दा आङ्ग नै जिरिङ्ग हुन्छ । त्यस्तै एउटा घ’टना रसियामा घ’टेको छ ।
डेली मेलले रिपोर्ट अनुसार रसियामा एक महिलाको मुखबाट चार फिटको सर्प निकालेको भि’डियो सार्वजनिक भएको छ । यतिबेला उक्त भिडियोको निकै चर्चा भएको छ । लेभासी गाउँमा रहेको दागेस्तेनस्थित आफ्नो घरको आँगनमा सुतिरहेकि महिलाको शरीरभित्र पसेको उक्त सर्पको लम्बाई करिब १.२ रहेको बताइएको छ ।
स्वास्थ्यमा अचानक ग’डबडी देखिएपछि महिलालाई तत्काल अस्पताल पु’र्याइएपछि पेटमा सर्प रहेको राज खुलेको हो । जुन दृश्य देखेर स्वयंम स्वास्थ्यकर्मी नै आश्चर्यजनक बनेका थिए । तर उक्त सर्प जीवित महिलाको शरीरभित्र कति समय रह्यो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
उनको घाँटीमा ट्युब छिराएर चिकित्सकले उक्त सर्पलाई निकालेका थिए । महिला स्वास्थ्यकर्मीले महिलाको मुखबाट बाहिर निकाल्दा सर्पलाई समातिन् । सबै स्वास्थ्यकर्मीहरू सर्पको लम्बाइ देखेर चिच्याए । दागेस्तानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । स्थानीयहरूकाअनुसार यस्ता घ’टनाहरु विरलै हुन्छन् ।
भिडियोमा देखिए अनुसार पञ्जा लगाएका पुरुष डाक्टरले ती महिलाको घाँटीमा ट्युब छिराएर सर्प निकालिरहेको देख्न सकिन्छ। भिडियोमा एकजना डाक्टरले ‘हेरौं, यो के रहेछ’ भनेको सुन्न सकिन्छ।
महिलाको मुखबाट सर्प निस्कने बित्तिकै महिला स्वास्थ्यकर्मीले निकै डराएको भावसहित त्यो समात्छिन्। उनी आत्तिदै पछाडि सर्छिन् र महिलाको मुखबाट निकालिएको वस्तु सर्प भएको थाहा पाएपछि स्वास्थ्यकर्मी कराएको पनि सुन्न सकिन्छ।
कति जनाले पढें ? 467
Previous Post: सुशान्त प्र’करण: दीपिकाकाे बयानले बलिउडमा खैलाबैला, स्विकारिन् यस्ताे कुरा….
Next Post: सुशान्त प्र’करण: श्रद्धा, दीपिका र साराको मोबाइल एनसीबीको क’ब्जामा….